Maqaallada Rick Chavie on Martech Zone |
Maqaallada by Rick Chavie
Rick Chavie waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee EnterWorks Bishii Meey 2015. Wuxuu yimid EnterWorks kadib markuu u adeegay SVP, Maareynta Xalinta Caalamiga ah oo leh hybris iyo kooxda macaamilka ee SAP iyo Ganacsiga, halkaas oo uu isugu keenay ganacsi dhijitaal ah iyo mid jireed iyo hanti CRM khibrad macmiil oo aan xuduud lahayn.
Ku Dhis Xiriirro Macaamiil Joogto ah oo leh Tayo Tayo leh
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba 66 dabeecadaha wax iibsiga ee internetka ay ku jiraan qayb shucuur leh. Macaamiisha ayaa raadinaya muddo dheer, isku xirnaan shucuur ah oo ka baxsan badhamada iibsiga iyo xayeysiisyada bartilmaameedka ah. Waxay rabaan inay dareemaan farxad, dabacsanaan ama raynrayn markay khadka tooska ah wax kaga iibsadaan tafaariiqle. Shirkaduhu waa inay u xuubsiibtaan sameynta xiriiriyadan shucuur leh macaamiisha isla markaana abuuraan daacadnimo waqti dheer ah oo saameyn ku leh hal iibsi. Soo iibso badhannada iyo xayeysiimaha la soo jeediyay ee ku saabsan warbaahinta bulshada